Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo galalka Google Drive ee ku jira Android | Androidsis
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo galka Google Drive ee ku jira Android
Kaydinta daruurku waa adeeg ay si ballaadhan u adeegsadaan isticmaaleyaal badani meel kasta oo adduunka ah si loo badbaadiyo macluumaadka qiimaha leh. Google Drive muddo dheer ayuu ka mid ahaa adeegyada ugu isticmaalka badan lala xiriirinayo barnaamijyo kala duwan, oo ay ku jiraan tusaale ahaan WhatsApp si loo abuuro keyd.
Si loo helo marinka qalabkayaga waa inaan ku sameynaa arjiga, tan waa inaan ku leenahay cinwaanka emaylka. Google Drive wuxuu siinayaa ikhtiyaarka lagu abuuri karo toobiye galka inaad si toos ah ugu tagto adigoon marin arjiga hore.
Si aad si dhakhso leh ugu gasho galka Google Drive taleefankaaga Android waxa ugu fiican ayaa ah in lagu daro marin ka helitaanka desktop-ka galka xididka oo kaliya waa inaan gujino si aan toos ugu galno. Tani waxay naga qaadan doontaa wax ka yar daqiiqad si aan si dhakhso leh oo nabadgelyo leh u abuurno.
Sida loo abuuro toobiye ka kooban galka Google Drive-ka Android
Abuuritaanka astaan ​​ayaa kuu fududeyn doonta inaad gasho galka, ka dibna xididka si aad uhesho feylashaada, ha ahaadaan sawiro, feylal ama xitaa fiidiyowyo. Waxaa ugu wanaagsan in la dalbado wax kasta oo lala shaqeeyo oo aan wax walba loo haysan qaab qas ah, maxaa yeelay waxaad ku abuuri kartaa faylal ku dhex jira Google Drive.
Si loo abuuro fayl Google Drive ah oo toobiye ah oo ku socda Android Samee waxyaabaha soo socda:
Soo gal barnaamijka Google Drive ee qalabkaaga, haddii aadan haysan waxaad ka soo dejisan kartaa Dukaanka Play-ka
Fur arjiga taleefankaaga oo gal galka oo aad rabto inaad si dhakhso leh uhesho oo guji saddexda qodob ee toosan
Hadda waxay ku tusi doontaa xulashooyin badan, guji "Kudar shaashadda guriga" waxayna kuu abuuri doontaa dariiqa loo maro galkaas oo aad ku qaban karto dhowr ilbiriqsi gudahood
Tani waxay ansax u tahay dhammaan fayllada, xitaa haddii aan dooneyno inaan galno gunta galka dhowr fayl oo lagu dhex abuuray hal si loo xareeyo hab nidaamsan. Google Drive maaha ikhtiyaarka kaliya ee lagu kaydiyo daruurtaMid ka mid ah oo na siinaya 1 TB meel waa Dubox, waa adeeg la tixgelinayo si aan loogu waayin meesha.
Google Drive wuxuu xadidayaa booska ilaa 15 GB dhowr adeegyadiisa ah, oo ay ka mid yihiin Gmail, Google Photos iyo Drive-ka aan kor ku soo sheegnay, laakiin waa suurtagal in boos badan laga helo Google One.Haddii inta badan aad u isticmaasho Drive in aad shaqeyso, helitaanka tooska ah ee galka shaqada ee taleefankaaga ayaa noloshaada ka dhigaysa mid aad u fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo galka Google Drive ee ku jira Android
Oppo Find X3 horeyba waxay u laheyd taariikh soo bandhigid: boodhadh xayeysiin ah ayaa la daadiyay